Madaxweyne Shariif oo ka qeybgalay banaan bax & R/w Gaas oo Muqdisho ku soo laabtay – SBC
Madaxweyne Shariif oo ka qeybgalay banaan bax & R/w Gaas oo Muqdisho ku soo laabtay
MAdaxweynaha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka qeyb galay banaan bax aad u balaaran oo dadweynaha Muqdisho ay isu soo bexeen iyagoona dareenkooda ku cabirayay sida ay uga xun yihiin qarax dhowaan ka dhacay Magaalada Muqdisho oo khasaare aad u farabadan dhaliyay.
Madaxweyne Shariif sh Axmed oo shacabka halkaasi kula hadlay ayaa taabtay dhinacyo farabadan oo ku aadan dhacdooyinka ka dhacaya Soomaaliya iyo sida ay u waxyeeleeyeen bulsha weynta Soomaaliyeed.
Waxa uu madaxweyne Shariif sheegay in Xarakada Shabaabul mujaahidiin xasuuq kula kacday shacabka Soomaaliyeed islamarkaana aay masuul ka tahay dhibaatooyinka soo gaaraya shacabka Muqdisho.
Waxaa kale uu sheegay in intii mudo aheyd ee Somalia ay burbursaneyd aan la arag koox cadeysata dhibaatenta shacabka waqti kasta sida uu hadalka u dhigaye.
Shacabweynihii Banaan bacaya isugu soo baxay ayaa ay ka muuqatay sida ay uga xun yihiin iyagoona socod iyo sawaxan dheer ku maray wadooyinka waaweyn ugu dambeyntiina isugu yimi istadiom Konis ee magalada Muqdisho halkaas oo ay kula hadleen saraakisha sar sare ee dowlada KMG ah ee Soomaaliya.
Ku dhowaad 70 qof ayaa ku geeriyooday todobaadkii aynu soo dhaafnay horaantiisii qarax xoogleh oo ismiidaamin ah uu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan goob ay degenaayeen 8 wasaaradood oo DKMG ah, waxaana qaraxaasi sheegtay Xoogaga Xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho ka soo degay Raiisul wasaaraha xukuumada FKMG ah ee Soomaaliya Mr C/wali Maxamed Cali Gaas, oo isagu mudooyinkii ugu dambeeyay safaro ku marayay wadamo ku yaala Africa iyo America.
Isagoo saxaafada kula hadlay Airport-ka Muqdisho ayaa raiisul wasaaruhu waxa uu carabka ku dhuftay in dhamaan safaradii uu ku maqnaa ujeedooyinkii uu ka lahaa ay u soo hagaageen kulamo uu wadama uu soo marayna kula soo yeeshay madax kala duwan ay ku soo dhamaadeen is afgarad.
Sidoo kale isla maanta ayaa raiisul wasaare Gaas uu kula kulmay gudaha Airport-ka magaalada Muqdisho wafdi ka socda dalka Burindi oo uu horkacayay, wasiirka gaashaandhigga dalka Burundi Gaciyu Bwenge Pontien kaas oo magaalada Muqdisho u yimid booqasho laba maalin ah sida uu saxaafada u xaqiijiyay Raiisul wasaaraha DKMG ah .
Sida runta ah labada nin ee xoogaaga ay lacagta siiyeen labanaanbaxay ayaga ayaa kamasuula laynta shacabka iyagaa sababay diinta gatay dalka gatay munaafiqiin ah hadii ay madax islaami wax ku xukuma yihiin somaliya ma.ahaateen sidan sababta ayagaa leh gaalada kilkisha gashaday walaala kadhigtay waa aboor aboor ciid kama dhergo iyana xaaraan kama dhergayaan baarlamaanku siday shalay yeeleen hadii rag wax uyeela lahayo waa horumar way ku amaanan yihiin gudoomiye ku xigeenkuna waa soomaali dhab ah shariifka baarlamanka haladilo horumarkaa malagaareen haduu joogi lahaa 2da shariif raiisalwasaaraha duqamagaalada intaasaa dadka dhibaysa allaha naga qabto